Nofy ratsy virosy vaovao ve? Miantso ny WTN Mandat ny Vaksiny Maneran-tany sy ny fitoviana amin'ny fitsinjarana
Home » Lahatsoratra farany farany » WTN » Nofy ratsy virosy vaovao ve? Miantso ny WTN Mandat ny Vaksiny Maneran-tany sy ny fitoviana amin'ny fitsinjarana
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Taitra sy tezitra i Afrika Atsimo taorian'ny nahitana ny tsimok'aretina Omicron an'ny coronavirus.
Nandritra ny alina, indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany miandrandra hazavana mamiratra kokoa any amin'ny faran'ny tonelina, niverina tao anatin'ny vanim-potoana maizina niaraka tamin'ny fanakatonana ny sisintany, fanafoanana ny sidina ary ny otrikaretina tsy fantatra izay manohintohina ny fahasalamam-bahoaka sy ny fivelomana.
Androany, miatrika krizy ara-pahasalamam-bahoaka hafa izao tontolo izao miaraka amin'ny fahitana ny tsindrona Omicron coronavirus izay mbola tsy dia fantatra loatra nefa mety ho areti-mifindra sy mampidi-doza kokoa. Avy any Afrika Atsimo ilay ratra, ary hita ihany koa tamina tranga mitoka-monina tany Hong Kong sy Belzika.
23.8%-n'ny mponina any Afrika Atsimo no vita vaksiny tanteraka, ary any amin'ny faritra maro any Afrika, io isa io dia ao anatin'ny isa tokana ihany, ary tsy ampy ny vaksiny.
Ny fizahan-tany dia mila firaisankina eran'izao tontolo izao mihoatra noho ny hatramin'izay izay anampian'ireo firenena ny fireneny.
Dr. Peter Tarlow, Filohan'ny WTN, dia mampahatsiahy an'izao tontolo izao fa ny firenena rehetra dia mizara ity planeta kely ity ary tsy maintsy miara-miasa isika mba hanafoanana ny COVID-19 na aiza na aiza eto amin'ny planeta.
Ny ady amin'ny COVID dia tsy asan'ny firenena tokana, fa ny firenena sy faritany rehetra miara-miasa ho an'ny fahasalamana sy tontolo milamina.
Juergen Steinmetz, Filoha WTN
Ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz dia nanampy hoe: "Ny fizarana vaksiny mitovy amin'ny firenena rehetra dia zava-dehibe. Aoka isika hampahatsiahy izao tontolo izao: Tsy misy olona azo antoka raha tsy vita vaksiny ny olona rehetra!”
Efa fantatra hatrany am-piandohana izany rehefa nilaza ny filoha amerikanina Biden taoriana kelin'ny fanokanana azy hoe: Tsy misy olona azo antoka raha tsy efa milamina ny rehetra.
Amin'ny tsy fanarahana ny fitsipika ara-tsiansa dia mety hivoatra mora foana ireo variana tsy voafehy amin'ny otrikaretina toa ny strang Omicron. Ny variana toy izany dia mety handositra ny fiarovana ny vaksiny ankehitriny, hanery an'izao tontolo izao hanomboka.
Loza tsy hain'ny zanak'olombelona ary tsy voatery zakaina izany.
Amin'ny ankapobeny, any amin'ireo firenena tsy misy ny vaksiny dia avo ny fandrahonana hiteraka trangan-javatra ratsy toy izany.
Ny toe-draharaha mipoitra any Afrika Atsimo izao dia manasaraka firenena 8 ao anatin'ny alina amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena sy ny fizahan-tany ary manelingelina ny toe-karena. Tokony ho fifohazana ho antsika rehetra izany.
Ny fanakatonana fotsiny ny sisintany eo amin'ny firenena dia vahaolana tena fohy. Mifandray ity tontolo ity, ary tsy manaja sisintany ny virus. Ny fanalahidy fantatry ny olombelona amin'izao fotoana izao dia ny vaksiny.
Tafiditra ao anatin'izany ny fizarana midadasika sy antenaina tanteraka eny rehetra eny, tsy miankina amin'ny tombony ara-bola na ny famerana, ny toerana ara-politika, ary ny antony hafa eto an-tany.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany dia miantso indray ny fanalefahana ny lalàna momba ny patanty sy ny fifanarahana iraisam-pirenena mba hiantohana ny fisian'ny vaksiny mahomby eny rehetra eny.
Cuthbert Ncube, filohan'ny filankevi-pitantanana afrikanina
Ny World Tourism Network, ho mpiara-miombon'antoka fototra amin'ny Birao fizahantany afrikanina (ATB), mahatsapa ho an'ny olona any atsimon'i Afrika, ary indrindra ho an'ireo namana sy mpikambana ao amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany.
Ny filohan'ny ATB Cuthbert Ncube dia niresaka momba ny fizarana vaksiny mitovy sy ny fanalefahana ny fepetra takian'ny patanty hanamora izany.
Ity toe-javatra ity dia mitaky fitarihana matotra mihoatra ny fizahan-tany, ary isika rehetra dia mila manosika sy manohana ny hetsika rehetra izay manome antoka ny tanjon'ny olombelona amin'ny fahazoana vaksiny.
Ny fitarihana mahomby tsy misy fitiavan-tena ao amin'ny UNWTO, ny OMS, eo amin'ny governemanta, ary amin'ny indostria lehibe dia manan-danja kokoa noho ny ankehitriny.
Ny WTN dia manohana ny baikon'ny vaksiny raha tohanan'ny manam-pahefana momba ny siansa sy ny fahasalamana, ary ho an'ireo izay afaka mahazo ny vaksiny soa aman-tsara.
Bebe kokoa momba ny World Tourism Network sy ny maha-mpikambana azy: www.tv.travel